याक्थुङ लिम्बू जाति र मर्चा उत्पादन एक चिनारी - Naya Online
बिहिबार, कार्तिक २५, २०७८ (November 11th, 2021 at 8:46pm ) ब्रेकिंग न्युज, ब्लग
उदय पूर्वेली चोङ्बाङक्याक
घरायसी जाँड बनाउन प्रयोग हुने मुख्य निर्विकल्प पदार्थ “मर्चा”को बारेमा हामी धेरैलाई थाहै छ । जसलाई अङ्ग्रेजीमा “Yeast” र याक्थुङ लिम्बू भाषामा “खेःसुङ” भनिन्छ । यसको विज्ञानको भाषामा एकोकोषीय फङगस हो । यो हावामा जताततै पर्याप्तरूपमा तैरिएको हुन्छ । मलतब यो पृथ्वीभरि नै सर्वसुलभ तवरले उपलब्ध छ । यसको लागि माउ अथवा एकप्रकारको अम्ललेदो (Sourdough starter) बनाउन फलफूल वा अन्नको पिठो र पानी सुरुमा १/१ अथवा बराबर घोलेर एउटा सफा जार वा पानीमा ७०° देखि ७५° तापक्रममा राख्दा उत्तम हुन्छ । त्यसमा दिनहुँ १/४ को अनुपातमा अथवा पिठो ४ आउन्स हालेमा पानी १ आउन्स हाल्नुपर्छ । वास्तवमा यो Starter वा एक खालको ढुसीलाई फिडिङ गरिएको हो । तापक्रमअनुसार ५ दिनपछि यसमा फोका उत्पन्न हुनुका साथै तरङ्गयुक्त हुन्छ । साथै अमिलो गन्ध निस्कन्छ । यो क्रिया तीव्र भइसकेपछि Wild Sourdough Starter वा Mother Yeast तयार हुन्छ । यो Non–Saccharomyces Cerevisiae Sourdough Starter हो । यसको वैज्ञानिक नाम Lactobacillus हो र विशेषगरी यसले Lactic acid उत्पादन गर्छ । यो सबैखाले Sourdough Starter हरूको जननी पनि हो । यसलाई मात्रा मिलाएर पिठोसँग मोलेर मर्चा बनाउन सकिन्छ । यसले पाकेको वा भिजेको अन्न र फलफूललाई मोलेर जाँड (beer) उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालको हकमा जाँडबाहेक छुर्पी बनाउन र अन्य मुलुकहरूमा बेकरी लगायत अन्य थुप्रै परिकार बनाउनमा पनि Sourdough Starter को प्रयोग विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग भइरहेको छ ।
तर अहिलेको प्रविधि सम्पन्न विश्वमा Saccharomyces Cerevisiae को प्रयोगद्वारा ल्याक्टिक एसिड उत्पादन गरेर कार्बोहाइड्रेट्सलाई कार्बन डाइअक्साइडमा परिणत गरेर फर्मेन्टेसन प्रक्रियाबाट अल्कोहल उत्पादन गर्ने चलन व्यापक र लोकप्रिय भइसकेको छ । यसबाहेक अरु थुप्रै विधिहरू प्रयोगमा आइसकेका छन् ।
वास्तवमा नेपालमा गरिने घरेलु उत्पादनको मर्चा (खेःसुङ) को मूल तत्व पनि खेःसुङ युमा ( Sourdough Starter) नै हो । यसलाई गाउँघरतिर अचेलका पुस्ताले मर्चाको माउ पनि भन्ने गरेको पाइन्छ ।
मेरो गाउँ अथवा ताप्लेजुङ जिल्लाको ढुङ्गेसाँघु फट्याङ्ग्रे घरेलुु मर्चा उत्पादनको जिल्लाकै प्रसिद्ध स्थान हो । यहाँकाले मर्चा बनाउँदा सबैभन्दा पहिले धानको चामल भिजाउँछन् । त्यो चामल राम्रोसँग भिजेपछि त्यसमा एकपाथी चामल बराबर सुख्खा मुठ्ठी अध्घाङमा (याक्थुङ भाषामा, यसको अर्थ कुखुराको चिरेर सफा गरेको आन्द्राजस्तो भन्ने हुन्छ) ढड्याएर मिसाइन्छ । यसको साथसाथै खोयोःमा अत्यधिक प्रयोग हुन्छ । यसैमा खरेटे झार, एकदुई टुक्रा अदुवाका टुक्रा, जिरे खुर्सानी आदि पनि मिसाइन्छ । कोहीले नासिलेक्ना र सेन्द्रेङना पनि मिसावट गर्छन् । तर यिनीहरू स्वादका लागि सहयोगी जडिबुटी मात्र हुन्, अनिवार्यता छैन ।
त्यसपछि यसलाई ढिकीमा कुटिन्छ । पिठोमा परिणत भइसकेपछि थोरै पानी हालेर राम्रोसँग मुछिन्छ । रोटीको आकार बनाउन मिल्ने अवस्थाको भएपछि यसलाई आफूले चाहेजस्तो आकार बन्ने परिणामको मुछिएको पिठो प्लास्टिक, नाङ्लो, कोलाको पात वा सानो साइजको मान्द्रो आदिमा उस्तै साइजका टुक्राहरू लहरै राखिन्छ । अनि ती टुक्राहरूमा खेःसुङ युमा (Sourdough Starter) को धूलो छर्किनुपर्छ । यो नभई नहुने पदार्थ हो । हाम्रो याक्थुङ समुदायमा कसैको कारणले झैझगडा वा कुनै किसिमको झगडा उत्पन्न भयो भने “खेःसुङ युमाग आम्भा कन्ना… ‘अर्थात्’ मुख्य कारणको माउ त ऊ… नै हो” भनेर खेःसुङ युमालाई बिम्बको रूपमा पनि बोलीचालीमा प्रयोग गरिन्छ । त्यसपछि त्यसलाई रोटी आकृतिमा चेप्टाएर गुन्द्रीमा कातेक्वा (उन्यू) छापेर एउटासँग अर्को नजोडिने गरी त्यसमाथि राखिन्छ । अचेल कातेक्वाको विकल्पमा परालको पनि प्रयोग पनि बढिरहेको छ । फेरि यसमाथि पनि कातेक्वा राखेर न्यानो सिरक अथवा कपडाले छोपेर ओथारो (Incubation) अवस्थामा राखिन्छ । जसलाई याक्थुङ भाषामा “खेःसुङ हाप्ला” भनिन्छ ।
प्रसङ्गवस म यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट पार्छु कि, धेरैले जाँड, चेम्घिक (किनिमा/किनामा) आदिलाई “कुहिएको/कुहाइएको” भनेर हियाउने गरेको पनि यदाकदा सुन्नमा आउँछ । यसो हो भने; सिन्की, गुन्द्रुक, गुम्साइएको कोला, दही आदिलाई पनि “कुहिएको” भन्नुपर्ने हुन्छ । तर सर्वथा यो बुझाई र भाष्य नै गलत हो । कुहिएको (Rotten/decayed) र गुम्साइएको (Fermented/Brewed) फरकफरक प्रक्रिया हुन् ।
खासमा फर्मेन्टेसन भनेकै जैविक रासायनिक प्रक्रियाबाट Lactic acid उत्पादन गर्ने प्रक्रिया हो अथवा यसको स्वाद बदल्ने माध्यम हो । अझ प्रष्टसँग भन्नुपर्दा, फर्मेन्टेसन भनेको कुनै पनि खाद्यवस्तुलाई धेरै लामो समयसम्म खान मिल्ने वा सडिनबाट बचाउने सर्वोत्कृष्ट उपाय वा माध्यम पनि हो । जुन प्रक्रियाबाट सबैभन्दा लामो समयसम्म टिक्नसक्ने अल्कोहलजस्तो अर्गानिक कम्पाउन्ड उत्पादन हुन्छ । मान्छेको शवलाई वर्षौंसम्म सडिनबाट बचाएर राख्न (Embalming) का लागि पनि ५६% मेथानोल (Methanol) को प्रयोग हुन्छ ।
सुन्दा केही अनौठो लागे पनि शिष्नमल (Smegma) समेत कुहिएको पदार्थ होइन । त्यसैले कुहिएको, प्राकृतिक तथा जैविक रासायनिक प्रक्रियाको बारेमा हामीले स्पष्ट हुने कोसिस गर्नुपर्छ ।
यसरी ओथारो (Incubation) मा राखिएको खेःसुङ हाप्ला उच्च तापक्रम भएको मौसम वा स्थानमा एकैरातमा उठ्छ वा खमीरयुक्त हुन्छ । उठेको वा खमीरकृत भएको थाहा पाउन त्यसको तापक्रम र गन्धको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया पूरा हुन ठण्डी मौसम वा कम तापक्रम पाइने ठाउँमा ३ देखि ६ दिनसम्म पनि लाग्नसक्छ । अत्यधिक चिसो वा गर्मीका कारणले कहिलेकाहीँ कामै नलाग्ने पनि हुनसक्छ ।
यसपछि उक्त मर्चालाई घाममा सुकाइन्छ । सुकिसकेपछि त्यसमा टाँसिएका कातेक्वाको पात र दागहरू ब्रसले सफा गरिन्छ । सफा भइसकेपछि दुईचार वटा मर्चाको धूलो पिसेर त्यसमा दलिन्छ । यसो गर्नुको कारणचाहिँ सेतो, सफा र राम्रो देखियोस् र ग्राहकहरू आकर्षित होउन् भन्ने मनोविज्ञानले गरिएको हो । याक्थुङ समुदायमा मर्चा बनाउने कामका लागि महिला र पुरुष दुवैथरी उत्तिकै खटिने गरेको भएपनि बेच्ने कामचाहिँ अहिलेसम्म महिलाहरूले नै सम्हाल्दै आइरहेको पाइन्छ ।
मोटामोटी घरेलु वा परम्परागत तवरले मर्चा उत्पादन गर्ने विधि यै नै हो । केहीले चित्तुको पात, डाँठ मसिनो पिसेर मर्चाको धूलोसँग मिसाई त्यसलाई धान वा कोदोको पिठोबाट मर्चाको आकार बनाई उक्त मर्चा र चित्तुको मिसाइएको पिठोले मोलेर पनि मर्चा तयार गरेको पाइन्छ ।
वास्तवमा चित्तु भनेको हातखुट्टा मर्किएको अवस्थामा समेत प्रयोग हुने निकै कडा आयुर्वेदिक जडिबुटी पनि हो ।
अब यसबारे याक्थुङ मुन्धुमले के भन्छ ?
यहाँ संक्षेपमा बुझ्ने कोसिस गरौँ ।
मुन्धुमका अनुसार; सोधुङगेन लेप्मुहाङले अन्नको सृष्टि गरेपछि आदिमानव खाम्बोङबा लुङबोङबाहरू उनीसँग ज्यादै खुसी भए । सम्मान स्वरूप उनीहरूले पकाएको कोदोको भात र शुद्ध जल सोधुङगेन लेप्मुहाङलाई दिनहुँ चढाउन थाले । यसरी चढाएको भात थुप्रिएर राश बन्यो । उक्त चढाएको अन्न र कुहिएर वा सडिएर जानथाल्यो । यसरी खाम्बोङबा लुङपोङबाले आफूलाई सम्मानपूर्वक चढाएको अन्न नष्ट भएकोले एकदिन सोधुङगेन लेप्मुहाङले सर्वव्यापी परमआत्मा उनै तागेरा निङवाभुमाङलाई पुकारे । आउँदा दिनहरूमा यसरी सडेर नष्ट हुनबाट रोकथाम गरेर कसरी अन्नलाई खानका लागि सदुपयोग गर्न सकिन्छ ? भनी सोधे ।
त्यसपछि, स्वयम तागेरा निङवाभुमाङ प्रकट भएर “मेरो पाउमा आएर दत्तचित्त भई ध्यान गर्नू, त्यसैक्रममा तिमी निदाउनेछौ, अनि तिमीले तिम्रो समस्याको समाधानको उपाय सपनामा प्राप्त गर्नेछौ, त्यसैअनुरूप गर्नू” भनेछिन् ।
तागेरा निङवाभुमाङले सपनामा दिएको पहिचानअनुसार नै सोधुङगेन त्यसपछिका दिनहरूमा खाम्बोङ्बा लुङबोङबाहरूले जङ्गल चहारेर विभिन्न प्रजातिका जडिबुटीहरू सङ्कलन गरी उक्त सोधुङगेन लेप्मुहाङलाई चढाएको खाना र पानीमा मिसाउन थालेछन् ।
केही दिनपछि त्यहाँबाट मगमग बास्ना निस्कन थालेछ ।
खाम्बोङबा लुङबोङबाहरूले चाख्दा खानयोग्य र गुलियो पनि थिएछ । त्यसैबेलादेखि उनीहरूले नियमि तवरले खाद्यपरिकारको रूपमा जाँड बनाउन र सेवन गर्न थालेछन् । यस मुन्धुमका आधारमा सुरुवातमा जाँड मदिराको रूपमा नभई खाद्यपरिकारको रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । साथै बराबर मात्रामा घोलिएको पिठो र पानी मिश्रित लेदोमा दैनिकरूपमा १ः४ का अनुपातमा पानी र पिठो थप्दै जाँदा ५ देखि ७ दिनसम्ममा ध्ष्मि क्यगचमयगनज क्तबतभच विकसित हुन्छ भन्ने जैविक रासायनिक प्रक्रियालाई पनि यसले नजिकैबाट पुष्टि गर्छ । किनकि, खाम्बोङबा लुङबोङबाहरूले दैनिकरूपमा कोदोको भात र पानी थप्नुका साथै जङ्गलका अनेकन जडिबुटी पनि मिश्रण गरेका थिए ।
मुन्धुमअनुसार, याक्थुङ जातिको हरेक कर्मकाण्डमा विधिको रूपमा साम्माङहरूलाई जाँडरक्सी चढाइन्छ । जाँडरक्सी उपलब्ध नभएको खण्डमा केही अन्नका दाना,पानी र त्यसमा मर्चाको थोरै धूलो लगाएर काम चलाउने चलन छ । रक्सीको अतिरिक्त सफा र ताजा पानीको प्रयोग हुन्छ ।
मुन्धुम वाचनका क्रममाः
पोरोक्मी माङ्रे, यम्भामी माङ् रे,
लुङदुम पाःवारेन, सिङबुङ पाःवारेन
पाङगेन्दिङ वाहित्ओ सिदाः केतुआङ
खेःसुङमु चोगु, सिदाःमु चोगु भनेर पनि सुन्न पाइन्छ ।
यी मुन्धुमी मूल्यमान्यता,आस्था र विश्वासहरूका बाबजुद पनि परम्पराग तवरले याक्थुङ समुदायले उत्पादन र उपयोग गर्दै ल्याएको थि (जाँड) अहिले याक्थुङ समुदायले मात्र नभएर देशव्यापीरूपमै मदिराकै रूपमा प्रयोग भइरहेको तथ्य कसैले नकार्न सकिँदैन ।
मदिरा ऐन, २०३१ को परिभाषाअनुसार; “मदिरा” भन्नाले अन्न, फलफूल वा अन्य कुनै स्टार्चयुक्त वस्तुलाई जीव रासायनिक प्रक्रियाद्वारा कुहाई वा अन्य कुनै तरिकाबाट तयार पारिएको अल्कोहलयुक्त पदार्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले रक्सी, जाँड, छ्याङ, व्हिस्की, रम, जीन, ब्राण्डी, भोड्का, बियर, वाइन, सेरी, सेम्पेन, साइडर, पेरी,मिड माल्टन, औद्योगिक अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्प्रिट, माल्ट स्प्रिट, साइलेन्ट स्प्रिट, डिनेचर्ड स्प्रिट र हेड्स स्प्रिट समेतलाई जनाउँछ” भनेर स्थानीय तथा परम्परागत घरेलुु उत्पादनको थि (जाँड) लाई मदिराको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसलाई शेर्पा भाषामा “छ्याङ” भनिने र यो निकै प्रचलित शब्द भएकोले यसलाई समेत कोड गरिएको छ । अर्को कुरा, यहाँ पनि “कुहाई” भन्ने गलत भाष्य प्रयोग गरिएको छ । यसले पनि हाम्रो देशका नीति निर्माताहरू कतिका दक्ष र योग्य छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
मदिरा ऐनअनुसार, मदिरा बिक्रीवितरण वा कारोबार गर्नको लागि अनिवार्य अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका नियम र मापदण्डहरू निकै सशक्त र मजबुत ढाँचाका बनेका छन् । यद्यपि, अहिलेसम्म फिल्डमा कडाइसाथ प्रभावकारी ढङ्गले लागू भएको पाइँदैन ।
केही वर्षयता जाँडरक्सीमा नौसागर (Ammonium Chloride) ब्याट्रीमा प्रयोग हुने एसिड, मेथानोल,युरिया र सिन्थेटिक केमिकल आदि मिश्रण गर्ने गरेको व्यापक चर्चा चल्ने गरेको यथार्थ हाम्रोसामु रहेको छ । यसरी मात्रा नमिलाइकन जथाभावी केमिकल प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएका मदिरा सेवन तथा बिक्रीवितरण गर्नु भनेको निश्चयै पनि घातक कार्य नै हो । रक्सी उत्पादनका लागि जीवजन्तूका दिसापिसाब सहितको आन्द्राभुँडी समेत यदाकदा प्रयोग गरेको पाइन्छ । जुन हदैसम्मको मानवीय अपराध पनि हो । पुर्ख्यौली पेसा, परम्परागत संस्कार र संस्कृतिको आडमा कसैले कसैलाई मानव स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर पु¥याउने विषादीको व्यापार गर्नु खासै उचित हुन्न भन्ने मेरो बुझाई हो । घरायसी प्रायोजनका लागि कानुनले कहीँ कतै छेकबार वा बाधा गरेको छैन ।
यसो भन्दैगर्दा राज्यले पनि गाउँघरतिर उत्पादन गरिएका जैविक रक्सी बरामद गरेर तमासा देखाउँदै घोप्ट्याउनु चाहिँ सुहाउँदो कार्य होइन । कानुनले पनि कसैले अवैध रक्सी उत्पादन गरेको वा लुकाएर राखेको सुराक पाएमा त्यहाँ खानतलासी गर्नुपूर्व सम्बन्धित आरोपित व्यक्तिलाई सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
अब, राज्यले यसलाई कसरी व्यावहारिक तवरले व्यवस्थापन गर्ने ? भन्नेबारे वैकल्पिक र मध्यमार्गी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । गुणस्तरयुक्त उत्पादन र परिणाममुखी आयस्रोतको माध्यम बन्न सकेको खण्डमा मात्र मदिरा बेचबिखनलाई व्यवस्थित र सेवनकर्तालाई पनि सुरक्षित गर्न सकिन्छ । यसका लागि वैज्ञानिक तवरले गहन अध्ययन, अनुसन्धान, परीक्षण र नियमन आदिलाई सशक्त र प्रभावकारी तुल्याउन सकेको खण्डमा मात्र यसले सार्थकता पाउने छ ।
द्रष्टव्यः समय–समयमा सामाजिक सञ्जालमा प्रशासनले स्थानीय तथा घरेलु उत्पादनका मदिराहरू नष्ट गरेका तस्बीर र समाचारहरू सम्प्रेषण हुनेगरेको छ ।
त्यसैलाई लक्षित गरेर यो स्तम्भ लेखन समावेश गरेको छु । साथै पाठकहरूको अमूल्य सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि सदैव आपेक्षित र प्रतिक्षारत रहनेछु ।